I-Raw Testosterone Inanthate powder (315-37-7) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / Testosterone Inanthate powder
SKU: 315-37-7. iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-Testosterone Inanthate enye yeendidi ezininzi ezinokuthenjwa kweTestosterone ezikhoyo. Ingumlinganiselo wejoyiki kunye nesantya esicothayo sokukhululwa ngenxa ye-esanthate ester enkulu enamatheleli yeT Testosterone.
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-mass order ye-Testosterone Enanthate powder (315-37-7), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Testosterone Enanthate powder ividiyo
I-Testosterone ephakamileyo ye-Enanthate
igama: I-Testosterone Inanthate powder
Ukusetyenziswa kwe-Testosterone ephakamileyo
I-Testosterone Inanthate i powder eluhlaza amagama
Elinye igama eliqhelekileyo nguVavanyo E, i-Testo E, Inanthate, njl.
I-Testosterone Inanthate yenye yeendidi ezininzi eziqinisekisiweyo ze Testosterone ezikhoyo. Ingxube ye-injection enezinga elincinci lokukhululwa ngenxa ye-Enanthate ester enkulu enamatheleli yeT Testosterone. Oku kukunyusa izinga lokukhululwa kunye nesiqingatha-sobomi beTesttosterone kwi-release release. Ubuninzi beemveliso zeTesttosterone eziye zenziwe ziyimveliso enye kunye nefomathi enye, echasene nemveliso yeT Testosterone equkethe umxube weendlela ezahlukeneyo ezichanekileyo kwi-liquid (njengeSustanon 250, umzekelo). I-Testosterone engaqinisekiyo inomlinganiselo omncinci wobomi, okwenza ukusetyenziswa kwayo kuphazamiseke kwaye akunakwenzeka (Ukumiswa kweT Testosterone yinto efana neT Testosterone equlethwe yiTesttosterone engaqinisekiyo, kwaye ayinayo i-ester ehlanganisiweyo kwisakhiwo sayo). I-Enanthate ester iyandisa ubuncinane be-Testosterone kwiintsuku ze-10, kwaye amazinga eplasma egazi ahlala ephakanyisiwe ixesha elipheleleyo malunga neeyure eziyi-2 - 3. I-Testosterone ngokwayo ithathwa njengona yendalo kunye nenqabileyo kakhulu ye-anabolic steroid nayiphi na umntu anokuyisebenzisa, kwaye kulula kakhulu i-anabolic steroid ngokubhekiselele kwindlela engasetyenziswa ngayo kwiinjongo kunye neenjongo ezahlukeneyo kunye neenjongo.
I-Testosterone Ephakamileyo yokusetyenziswa kwePowder
Ijoza ye-Intramuscular: ngokuqhelekileyo i-50-250mg rhoqo, yonke i-2-4weeks. Umsebenzi wezesondo uyancipha, 100-400mg rhoqo, ii-1-2 ngamaxesha onke ngosuku. Izifo ezixhamlayo, i-100-200mg rhoqo, zonke ii-3-4weeks.
Isilumkiso kwi-Testostoneone Enanthate powder
Umlinganiselo omkhulu okanye ukusetyenziswa kwexesha elide, kunokubangela ukugcina amanzi kunye ne-edema. Abasetyhini banokuba neempawu zobuntu emva kokusetyenziswa.
I-Testosterone Inanthate powder Imiyalelo eyongezelelweyo
I-Raw Testosterone Enanthate powder
Njengoko kuthethwe, i-Testosterone Enanthate yinto nje iTesttosterone kunye ne-Enanthate ester eboshwe kwiComptosterone. Ngokukodwa 'Ukuququzelela' yi-Enanthoic acid, kodwa emva kokubophelwa kwiTestosterone ngokufanelekileyo kuthethwa ngokusemthethweni kwi-chemistry njengesibophelelo se-ester (okanye ukuxhunyaniswa kwe-ester). I-Enanthoic acid ihlanganiswe kwiqela le-17-beta hydroxyl kwisakhiwo seTesttosterone. I-anabolic steroids eqinisekisiwe yinto enxubileyo, kwaye ikhulule ngokukhawuleza kwi-site injection - nangona kunjalo, oku akusona isizathu esona sizathu sokuba kutheni i-esters yandisa izinga lokukhululwa kwe-anabolic steroid. Isizathu esiyinhloko sokunyuka kwesantya sokuphila kunye nentlawulo yokukhululwa kukuba xa iTestosterone Inanthate ingena egazini, i-enzymes isebenza ukuphula umxho phakathi kwe-ester kunye nehommone, ethatha ixesha elithile. Isiphumo sokuphela kukuba i-ester isuswa kwi-hormone ngama-enzyme, kwaye yintoni eseleyo yi-Testosterone ecacileyo ekhululekile ukwenza umsebenzi wayo emzimbeni. Le nkqubo yee-enzymes ehamba kwi-ester kwi-molecule yeT Testosterone yinto enoxanduva lokukhutshwa kwezinga elincinci. I-Testosterone yedwa engenawo u-ester axhonyiwe kuyo inesigamu-nobomi malunga ne-2 - ii-4 iiyure. Xa i-ester e-Enanthate iqhotyoshelweyo kuyo, ukudala i-Testosterone Enanthate, i-half-life-life ye-Testosterone iyakwandiswa kwiintsuku ze-10, ukunikezela ngokukhululeka kunye nomsebenzi we-hormone.
Qaphela: Uvavanyo I-E melting point = 90-96 F / 34-39 ℃. Kulula kakhulu ukufumanisa ukuba uvavanyo lwakho luyi-powder eluhlaza luhlambulukile okanye alukho.
I-Testosterone Inanthate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Testosterone Enanthate powder evela kwi-AASraw
I-AASraw inikeza ubunyulu 99% Testosterone Inanthate powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iilabhu zangaphantsi zokusetyenziswa kwegciwane.
I-Testosterone Inanthate powder ebomvu Testosterone E
Ukupheka kwamanqwanqwa amancinci amancinci:
1) Ukuvavanya Ukuphucula umgubo ococekileyo 5 ukuguqulwa kwegramu 20ml @ 250mg / ml
Uvavanyo lwe-5 i-E
1ml Benzyl Utywala = 5% BA
I-15.25 ml yesame leoli
2) I-Testosterone Inanthate powder eluhlaza 100g 500ml @ 200mg / ml
I-325ml I-Oil Grapeed
10ml ye-benzyl alcohol
I-3) I-Testosterone Inanthate powder eluhlaza 12g 40mls @ 300mgs / ml